Mayelana ne-Tekna Hyperbaric - I-HBOT ye-Oxygen Hyperbaric
Malunga neTekna Hyperbaric
ikhaya/Malunga neTekna Hyperbaric
Malunga neTekna Hyperbarictekna_mod2018-01-04T17:19:53+00:00
NgamaChambers eTekna Hyperbaric
I-Tekna nguMenzi oyiNtloko weMonoplace kunye ne-Multiplace Hyperbaric Chambers.
I-Tekna inikezela ngeNtengiso, iNkonzo, kunye noQeqesho kwi-Hyperbaric Oxygen Treatment. [HBOT]
I-Tekna ipheleleyo ye-Hyperbaric ye-Oxygen Treatment Chamber ye-OEM.
I-Tekna inendawo ye-3D CAD / CAM / FEA yeSebe lezobuNjineli, kunye ne-ASME / PVHO Inkcitho yokuThengisa iMpahla yokuThengisa, kunye nePaint Paint and Finishes Department. Sijika iiplati ezicwangcisiweyo zensimbi zibe kwiinqanawa ezixinzelelweyo.
Kwishishini ukususela ngo-1989, abasunguli be-TEKNA baye babandakanyeka yokudilika ukususela kwi-1973 kunye neyeza ze-hyperbaric ukususela kwi-1976.
Inkqubo yethu ye-Class A Multiplace ne-Class B Monoplace I-HBOT iinkqubo zibe yi-FDA 510 (k) ichanekile ukususela kwi-12 / 07 / 2000 kwaye yonke imikhumbi yethu yoxinzelelo i-ASME, iBhodi kaZwelonke, kunye ne-NFPA-99 kunye ne-PVHO-1 ikhowudi iyahambelana. Iinkqubo zethu zeklasi C zi-ASME kunye ne-NFPA ehambelana ne-addenda yakutsha.
Inzuzo ekhethekileyo yokuthenga ngeTEKNA kukuba siyi-OEM kuphela evelisa iiphakheji zomoya zonyango (ezingabonakaliyo) ezenzelwe ngokukhethekileyo i-HBOT.
Ezinye izibonelelo zibandakanya: ukuyila ngokwezifiso, ukuhanjiswa kunye nokufakela emhlabeni wonke, ukuqeqeshwa kwangaphakathi, kunye nolunye uluhlu lwezinye iinkqubo zokuqeqesha kunye neengcebiso.
I-TEKNA inika i-POCD (umxholo wemizobo yoxhumo), ngoko unokwenza ikontrakta yakho ukwakha igumbi lokulungela igumbi, kwaye siya kunceda ufumane ixabiso elifanelekileyo kwi-med-gas plumbing kunye ne-medical grade grade oxygen.
I-FSS yethu (iinkqubo zokunciphisa umlilo) ziquka imilambo ye-vinyl epoxy-line-line kunye nezitya zokuhambisa umbane.
I-TEKNA iya kwenza ulondolozo lwakho lonyaka jikelele kunye nokuhlaziywa kwiirhafu ezifanelekileyo.
Silindele ukusebenzisana nawe.